SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲ Arabic အဘိဓါန်ဝေငှ | Data Recovery
SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲ Arabic အဘိဓါန်ဝေငှ
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲ Arabic အဘိဓါန်ဝေငှ
Rajji program ကိုများအတွက် activation ဖွဲ့စည်းပုံကို download လုပ်ပါဖို့အောက်ကလမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာRescuePRO®
1. SanDisk လွန်ကဲသင့်ရဲ့ကဒ်ကိုသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိသောအောက်ပါကူပွန်ကနေကို Select လုပ်ပါ.
>>>>စကားရိပ်: အညီရွေးချယ်သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဘောက်ချာဖွဲ့စည်းပုံမှာRescuePRO®RescuePRO® Deluxe ကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန်RescuePRO® SSD ကိုရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. သင်၏ operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းရွေးချယ်ထားသောဘောက်ချာအောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို select ပေးပါ.3. စစ်ဆေးပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် အဆိုပါအတိုကောက်ကုဒ်တွေနဲ့စတင်ကြောင်းကိုသင်၏ serial number ကို အသုံးပြု. activation ရတဲ့အပေါ်ညွှန်ကြားချက် RPRID.** ကြောင်း Rajji မှတ်ချက်: သငျသညျ program တစ်ခု RescuePro Deluxe ဘောက်ချာနှင့်နံပါတ်စဉ်ရှိပါက RPRID နှင့်အတူစတင်-0305,
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် RPRID နှင့်အတူစတင်ကြောင်းအပြည့်အဝ serial number များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်-0305 တစ်ဦးကိုအစားထိုးဘို့ကုမ္ပဏီမှ SanDisk. **
إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows XP، ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ للحصول على نسخة متوافقة مع نظام تشغيل XP من برنامج RescuePRO® Standard أو ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ للحصول على نسخة متوافقة مع نظام تشغيل XP من برنامج RescuePRO® Deluxe